Ma afgembi milateri baa ka dhacay Guinea? | Berberanews.com
Home WARARKA Ma afgembi milateri baa ka dhacay Guinea?
Ma afgembi milateri baa ka dhacay Guinea?
CONAKRY — Ciidamo afgambi ka wada dalka ku yaalla galbeedka Africa ee Guinea ayaa muuqaal ay usoo direen wakaaladda wararka AFP ku sheegay inay gacanta ku dhigeen madaxweyne Alpha Conde, islamarkaana ay kala direen dowladdii.
“Waxaan go’aansanay in kadib markii aan gacanta ku dhignay madaxweynaha inaan baabi’ino dowladda,” ayuu yiri Mamady Doumbouya. Mamady Doumbouya ayaa intaas ku daray in xuduudaha dhulka iyo cirka ee Guinea la xiray.
Previous articleHooyada dhashay Ikran Tahliil oo ka hadashay dilka gabadheeda
Next articleFahad Yaasiin oo ka jawaabay dilka Ikraan Tahliil